Indlu Entlanu - igumbi elinomtsalane laseCynthia - I-Airbnb
Indlu Entlanu - igumbi elinomtsalane laseCynthia
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguFilipe & Vera
UFilipe & Vera yi-Superhost
Indlu eZintlanu yindlu ethandekayo nenomtsalane, ngokwesiko kwaye ihonjiswe ngokulula, ibekwe kwiziko lembali leSintra. Ipropathi itholakala kwi-Villa yekhulu le-XVIII, ukuhamba ngemizuzu emi-5 ukusuka kwisikhululo sikaloliwe kunye nemizuzu eyi-15 yokuhamba ukusuka kwiSintra's National Palace. Le ndlu inegumbi lokuhlala elikhulu, i-terrace, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, amagumbi okuhlambela e-2 ekwabelwanayo ngayo, amagumbi amabini aphindwe kabini kunye, amagumbi amabini adibeneyo, enye ineebhedi ezi-4 kunye nenye ineebhedi ezi-3. Onke amagumbi anomxholo wawo oboniswe ngeefoto zethu
Indlu emihlanu ibekwe kwiziko lembali yeSintra kwaye, kwangaxeshanye ijikelezwe yindalo, eyenza ibe yodwa.
Ukuhamba ukusuka endlwini ukuya kwiBhotwe likaZwelonke kuthatha imizuzu eyi-15 kuphela kwaye udlula kwezinye iindawo ezinomdla kunye neendawo ezimangalisayo.
Indlu Entlanu yeyona ndawo ifanelekileyo kwiintsapho, izibini, izihlobo okanye abahambi bebodwa!
4.87 · Izimvo eziyi-169
INdlu emihlanu ikwi-Villa yenkulungwane yeshumi elinesibhozo, ijikelezwe yindalo kwaye ikufutshane nezinye iindawo eziphezulu zabakhenkethi eSintra.
Umbuki zindwendwe ngu- Filipe & Vera
Kuba sobabini singabafoti, sibonelela ngeendwendwe zethu ithuba leseshoni yokufota. La mava enzelwe ukwenza ukuba uhambe ixesha ubuyela kwiminyaka yokuqala yokufota. Uya kuba nomzobo wakho wenziwe ngenye yezona nkqubo zindala zokufota: ipleyiti emanzi icollodion kwaye uya kuba nethuba lokuva yonke inkqubo yophuhliso. La mava antywilayo aya kubanjelwa KWISITUDIO SESIHLANU SEHISTORIC PHOTOGRAPHY, yona ngokwayo ixhotyiswe ngeekhamera zakudala, kunye nefenitshala, ecaleni kolunye uncwadi kwiFoto yenkulungwane ye-19, zonke zilungiselelwe ukwakhiwa kwakho.
Ngolwazi oluthe vetshe malunga nale nkonzo (amaxabiso, iishedyuli kunye nezinye iimeko) nceda uqhagamshelane nathi okanye ubhukishe ngamava e-AIRBNB (https://www.airbnb.com/experiences/190623)
Sikwakhona kulo naluphi na uncedo onokulufuna.
Ngohambo lweTuk Tuk, iibhayisekile zokurenta okanye ezinye iingcebiso nceda uzive ukhululekile ukusibuza!
Kuba sobabini singabafoti, sibonelela ngeendwendwe zethu ithuba leseshoni yokufota. La mava enzelwe ukwenza ukuba uhambe ixesha ubuyela kwiminyaka yokuqala yokufota. Uya kuba nomzo…
Inombolo yomthetho: 27964/AL